Izindaba - [Amathiphu Okonga Uphethiloli] Ukusetshenziswa kukaphethiloli kwe-excavator kuhluke kakhulu, igebe phakathi kwabashayeli abasha nabadala likhulu kakhulu?
[Amathiphu Wokonga Uphethiloli] Ukusetshenziswa kukaphethiloli kwe-excavator kuhluke kakhulu, igebe phakathi kwabashayeli abasha nabadala likhulu kakhulu?
[Amathiphu Okonga Okokhelekayo] Ukusetshenziswa kukaphethiloli we-excavator kuhluke kakhulu, igebe phakathi kwabashayeli abasha nabadala likhulu kakhulu?
Umehluko phakathi kwe-novice nomshayeli omdala awugcini nje kwezobuchwepheshe, kodwa futhi imininingwane yansuku zonke…
Lapho bebhekene nezimo ezahlukahlukene zokusebenza, abashayeli asebemnkantshubomvu bangalawula kalula ngokuhlangenwe nakho kwabo okunothile ukuqinisekisa ukuthuthuka komsebenzi, futhi bangcono kunabashayeli be-novice maqondana nokonga uphethiloli nokungakhathazeki.
Ngakho-ke, yini umehluko phakathi komshayeli we-novice nomshayeli omdala osebenzisa i-excavator?
Nciphisa ukugcwala kwe-excavator
Ekusebenzeni kwangempela, sizothola ukuthi ngoba i-valve yokuphepha ejikelezweni le-hydraulic ivulekile, uma ukugcwala kwenzeka, noma ngabe unyusa impintsha, amandla we-excavator ngeke akhule ngesikhathi sokusebenza kwangempela, futhi inkosi ngeke isakwazi inyathele. , Uma uqhubeka nokunyathela, kuzosaphazwa uwoyela omningi.
Khetha indawo efanele yomsebenzi
Abashayeli abangomakadebona abangomakadebona bazokhetha indawo efanelekayo uma bengena endaweni, ngokungafani nama-novice angena kule ndawo ngaphandle kokukhetha. Bazokhetha ubude obufana nalobo begumbi lezimoto ezilayishiwe ukunciphisa ubude be-excaver ngesikhathi sokusebenza, ukunciphisa ibanga lokusebenza, futhi ngokwemvelo bagweme ukumoshwa kukaphethiloli.
Vele kunemininingwane eminingi emincane mayelana nokonga uphethiloli. Inqobo nje uma uqinisa isifundo sakho sansuku zonke futhi ufingqa amathiphu akho wokonga uphethiloli emsebenzini, ngikholwa ukuthi kungekudala uzoba umshayeli omdala owonga uphethiloli futhi ongakhathazeki!